I-Audio-Technica Yazisa i-ATH-GL3 kunye ne-ATH-GDL3: Ii-headphone ezimbini ze-Hi-Fi Gaming | ndisuka kuMac
I-Audio-Technica Yazisa i-ATH-GL3 kunye ne-ATH-GDL3: Ii-headphone ezimbini ze-High-Fidelity Gaming
I-Audio-Technica Yinkampani eyaziwayo ngakumbi ngomgangatho wee-headphones zayo kwaye kule meko isinika iimodeli ezimbini ezintsha zee-headphones ezenzelwe ngokukodwa abadlali begeyimu, kodwa ngokucacileyo ezinokuthi zisetyenziswe ngaphandle kwezi meko.
Kule meko yi entsha ATH-GL3 kunye ATH-GDL3. Inkampani iveza ii-headphone zayo ezintsha ezithembekileyo, zombini kwinguqulelo yayo enoyilo oluvaliweyo oluvulekileyo, i-ATH-GL3, kunye nevulekileyo, i-ATH-GDL3. Zombini ezi modeli ziyahambelana ne-PS4, i-PS5, i-Xbox One, i-Xbox Series X, ii-laptops, ii-PC kunye nezinye izixhobo ezinomgangatho we-3,5mm we-headphone jack ye-TRRS okanye ngegalelo le-microphone eyahlukileyo kunye nemveliso ye-headphone.
Ngale ndlela, ifemu ibonisa ukuba ezi modeli zimbini ezifanayo kodwa ezinomahluko ocacileyo woyilo kunye nokusebenza. Imodeli ye-GL3 ivaliwe kwaye inikezela ngesandi esibalaseleyo sokwahlukaniswa, ivalela ingxolo ejikelezileyo ukuze uve kwaye uzive ngalo lonke ixesha amava isandi immersive ngokwenene.
Uyilo lwe-ATH-GDL-3 luvulekile kwaye kulo mzekelo amava okuphulaphula antywila, okuvumela ukuba izandi zibekwe ngaphakathi kwintsimi yesandi esibanzi. Ubunzima bungama-220g kuphela, ngezi headphones ungadlala iiyure kunye nokukhanya kwamafu. Ziyafana ngaphandle kodwa nganye ineempawu zayo.
Ukuthuthuzela kunye nomgangatho womsindo uqinisekisiwe kuzo zombini iimodeli, ngokuqinisekileyo asinakuthandabuza. Omnye umba wezinto zokwakha ezidla ngokwenziwa ngeplastiki, oku akubi kwaphela, kodwa siyaqonda ukuba ekuqalekeni kusenokubonakala ngathi yintsimbi kwaye akunjalo. Njengoko sithetha, oku akuhambelani nomgangatho wee-headphones, isandi kunye nokuqina kwazo.
Kuzo zonke iimodeli esizivavanyileyo kwi-ATH, siqaphele a umgangatho ophezulu wezinto eziphathekayo, zikhululekile ngokwenene ukusebenzisa, zixhathisa kunye nomgangatho weaudio kwinqanaba lee-headsets ezimbalwa ezifanayo zamaxabiso. Oku kwibala elithi "umdlali" ngokungathandabuzekiyo kuthatha ukubaluleka okukhulu.
I-Audio-Technica ATH-GL3 iyafumaneka ngoku www.audio-technica.comnge Ixabiso le-119 euro. Ngokwenxalenye yayo, iAudio-Technica ATH-GDL3 zikwafumaneka kwiwebhusayithi yeAudio-Technica ekwi-intanethi. ixabiso le 139 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Audio-Technica Yazisa i-ATH-GL3 kunye ne-ATH-GDL3: Ii-headphone ezimbini ze-High-Fidelity Gaming
Amarhe amatsha malunga nesixhobo esinesikrini se-intshi engama-27 yeWWDC 2022
I-Podcast 13 × 24: Ukuphinda kusetyenziswe iiprosesa ukukhathalela indalo